Yangon – Department of Medical Service
Posted on November 26, 2019 by Editor 1
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၂)ရက် ကမ္ဘာ့ပဋိဇီ၀ဆေးဆိုင်ရာအသိပေးရက်သတ္တပတ် (WAAW) အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Hotel Melia၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာစံရွှေဝင်း၊ ရခိုင်တိုင်းရင်း သားရေးရာဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးတင်မောင်ထွန်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊... Read More | Share it now!
Posted on June 13, 2019 by author 1
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ – အမှတ်- ၈၅၊ သစ္စာလမ်း၊ ကံဘဲ့ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်း။ ၂။ ဆေးရုံ၏မျက်နှာစာဓါတ်ပုံ ၃။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ – ၀၁ ၈၅၅၀၆၈၉၊ ၀၁ ၈၅၅၀၆၈၅၊ ၀၁ ၈၅၅၀၆၈၄ ၄။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သော – ဆေးကုသဆောင် – ၁၊ ၂၊ ၃၊ ခွဲစိတ်ကုသဆောင်၊ နှလုံး ဌာနများ ဆေးကုသဆောင်၊ နှလုံးခွဲစိတ်ကုသဆောင်၊ မွေးကင်း (Speciality Units) စအထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်၊ အထူးကြပ်မတ်ကုသ ဆောင်၊ ကျောက်ကပ်ကုသဆောင်၊ ဓါတ်မှန်ဌာန၊ ဓါတ် ခွဲဌာန။ အရေးပေါ်နှင့်ပြင်ပလူနာဌာန၊... Read More | Share it now!
၁။တည်နေရာ – မေတ္တာလမ်း(၁၀)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ ၂။ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ – အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးဆေးရုံကြီး၊ မေတ္တာလမ်း၊(၁၀)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ (၀၁၈-၅၆၂၅၂၂ / ၀၁၈-၅၆၂၅၃၃) E mail address – SOWCH@gmail.com ၃။ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ -သားဖွားမီးယပ်ဌာန/ ကလေးကုသဌာန ၄။ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (၄-၁) General OPD Timetable (၂၄)နာရီကုသမှုပေးပါသည်။ (၄-၂) Specialist OPD Timetable ပြင်ပလူနာအချိန်ဇယားဖြင့်ဖေါ်ပြပါသည်။ ... Read More | Share it now!
(၁) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်/လိပ်စာ ဖုန်း – ၀၁-၂၂၂၈၆၁ Fax – ၀၁-၂၂၀၄၁၆ လိပ်စာ – အမှတ်(၄၇၇)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ဆေးရိုးတန်း/ငြိမ်းချမ်းရေးရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ (၂)ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ(General/Speciality Units) Medical Ward Surgical Ward Obstetric&Gynaecology Ward Child Ward Eye Ward ENT Ward Ortho Ward OMF & Dental Ward Skin Department Physical Medicine Department Operation Theatre Laboratory Department Radiology Department ၃။ ပြင်ပလူနာ၊ အထူးကုပြင်ပလူနာဌာနကြည့်ရက်နှင့်အချိန် နေ့ ဌာနများနှင့် လူနာကြည့်ရှုချိန် နံနက် (၈:၀၀)နာရီ မှ (၁၂:၀၀)နာရီထိ နေ့လည် (၁:၃၀)နာရီမှ (၄:၃၀)နာရီထိ တနင်္လာ – ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်(အသစ်) – အရေးပြားလူနာ – နား၊... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်နေရာနှင့်ဓါတ်ပုံ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလမ်း၊ပဲခူးစုရပ်ကွက်၊သန်လျင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ 05621511 (Ext;12), 05623328(Fax), thanlyingeneralhospital@gmail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ (General/ Speciality Units) No Ward / Depatrment 1 Medical Ward2Surgical Ward3Obstertric and Gynaecological Ward4Paediatric Ward5Orthopedic Ward6Eye Ward7ENT Ward 8 Operation Theratre9Dental Dept; 10 Psychiatry Dept; 11 Physical Medicine and Rehabilitation Dept; 12 Imaging Dept; 13 Pathology Dept; ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (၄.၁) General OPD Timetable စဉ် ဌာန နေ့ရက် အချိန် ၁။ Emergency (အရေးပေါ်ဌာန) ပိတ်ရက်မရှိ (၂၄)နာရီ ၂။ OPD (ပြင်ပလူနာဌာန) တနင်္လာမှသောကြာ (အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များမပါ) နံနက်... Read More | Share it now!